Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/9 Febroary 2014 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/9 Febroary 2014
zareo (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
nanombohan' (nitranga in-1) : Hatramin'ny nanombohan'ny Zoron'ny Tanora, nitombo avy amin'ny 50 ka tonga hatramin'ny 252 ny isan'ny mpitsidika ny tranomboky isan-kerinandro tao anatin'ny herintaona. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
vakio (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
hampianarana (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Mpandresy (nitranga in-1) : Mpandresy tamin'ny fifaninanan-tsarin'ny tranomboky, nahazoana alalana avy amin'ny pejy facebook-n'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
izay (nitranga in-4) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fahitana (nitranga in-1) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
alalana (nitranga in-2) : Mpandresy tamin'ny fifaninanan-tsarin'ny tranomboky, nahazoana alalana avy amin'ny pejy facebook-n'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
maromaro (nitranga in-1) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Midika (nitranga in-1) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
hevitra (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
Izany (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fananganana (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
aorian' (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
facebook (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
mialoha (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Tanora (nitranga in-3) : Antsoin'ireo mpiandraikitra ny tranomboky ho “efitra fandraisam-bahiny faharoa” ho an'ny ankizy maro ny Zoron'ny Tanora. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
izany (nitranga in-5) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
lalindalina (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Azonao (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
Azonao atao ny manjohy ny tranomboky ao amin'ny pejy Facebook-ny. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
vaovao (nitranga in-2) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
alalan' (nitranga in-1) : Mora mifandray aman'olona ireo mpianatra ireo amin'ny alalan'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
valinteny (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
manao (nitranga in-2) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
inona (nitranga in-4) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fotoana (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
delicious (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
twitter (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
Tsapan' (nitranga in-1) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
nadika (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
ihany (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mianatra (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
video (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
misokatra (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Mora (nitranga in-1) : Mora mifandray aman'olona ireo mpianatra ireo amin'ny alalan'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fahaizana (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
andro (nitranga in-1) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
matetika (nitranga in-1) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
multimedia (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
tahala (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
natokana (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fiandrasana (nitranga in-3) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
hetsika (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
reddit (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
bosniaka (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Antsoy (nitranga in-1) : Antsoin'ireo mpiandraikitra ny tranomboky ho “efitra fandraisam-bahiny faharoa” ho an'ny ankizy maro ny Zoron'ny Tanora. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
anaty (nitranga in-2) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fahatsapana (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Zavidovićy (nitranga in-2) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
nametraka (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
StumbleUpon (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
ahitana (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
aterineto (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Nandika (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
solosaina (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mpialokaloka (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
miaraka (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Laura (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
iray (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
tahaka (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
manazava (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
fohy (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
mandeha (nitranga in-1) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
aman' (nitranga in-1) : Mora mifandray aman'olona ireo mpianatra ireo amin'ny alalan'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
misy (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
olan' (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Mpanoratra (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
Mamisoa (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
pejy (nitranga in-2) : Mpandresy tamin'ny fifaninanan-tsarin'ny tranomboky, nahazoana alalana avy amin'ny pejy facebook-n'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
ambanivohitra (nitranga in-1) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
hampiroso (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
maro (nitranga in-3) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
isan' (nitranga in-3) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
tamy (nitranga in-1) : Mpandresy tamin'ny fifaninanan-tsarin'ny tranomboky, nahazoana alalana avy amin'ny pejy facebook-n'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
tranomboky (nitranga in-6) : Mpandresy tamin'ny fifaninanan-tsarin'ny tranomboky, nahazoana alalana avy amin'ny pejy facebook-n'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
ambonivohitra (nitranga in-1) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
talenta (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mpianatra (nitranga in-7) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Manana (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Herzegovinia (nitranga in-1) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
nahazoana (nitranga in-2) : Mpandresy tamin'ny fifaninanan-tsarin'ny tranomboky, nahazoana alalana avy amin'ny pejy facebook-n'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
miandry (nitranga in-1) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
googleplus (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
tohanan' (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
ahazoana (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
herintaona (nitranga in-1) : Hatramin'ny nanombohan'ny Zoron'ny Tanora, nitombo avy amin'ny 50 ka tonga hatramin'ny 252 ny isan'ny mpitsidika ny tranomboky isan-kerinandro tao anatin'ny herintaona. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
hampiroborobo (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
manjohy (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
indrindra (nitranga in-1) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
teknolojia (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mandany (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Zoron' (nitranga in-4) : Antsoin'ireo mpiandraikitra ny tranomboky ho “efitra fandraisam-bahiny faharoa” ho an'ny ankizy maro ny Zoron'ny Tanora. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mpiandraikitra (nitranga in-2) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
miorina (nitranga in-1) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
nitombo (nitranga in-1) : Hatramin'ny nanombohan'ny Zoron'ny Tanora, nitombo avy amin'ny 50 ka tonga hatramin'ny 252 ny isan'ny mpitsidika ny tranomboky isan-kerinandro tao anatin'ny herintaona. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
lahatsoratra (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
mpitsidika (nitranga in-1) : Hatramin'ny nanombohan'ny Zoron'ny Tanora, nitombo avy amin'ny 50 ka tonga hatramin'ny 252 ny isan'ny mpitsidika ny tranomboky isan-kerinandro tao anatin'ny herintaona. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
ankizy (nitranga in-2) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mifandray (nitranga in-1) : Mora mifandray aman'olona ireo mpianatra ireo amin'ny alalan'ny tranomboky. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mizatra (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
hianatra (nitranga in-1) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
akaiky (nitranga in-1) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Hatramy (nitranga in-1) : Hatramin'ny nanombohan'ny Zoron'ny Tanora, nitombo avy amin'ny 50 ka tonga hatramin'ny 252 ny isan'ny mpitsidika ny tranomboky isan-kerinandro tao anatin'ny herintaona. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Bosnia (nitranga in-1) : any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
atao (nitranga in-1) : misy video fohy manazava ny toe-draharaha ao an-toerana sy ny valinteny avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Zoron'ny Tanora:
nitarika (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Mahasarika (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
ireo (nitranga in-3) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Morris (nitranga in-1) : Mpanoratra Laura Morris · Nandika Mamisoa
tetikasa (nitranga in-1) : Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Syria (nitranga in-1) : Mahasarika karazam-pianatra maro izany, ary anatin'izany ny tanora mpialokaloka avy any Syria, izay mandany fotoana miaraka amin'ny mpianatra ao an-toerana sy mianatra [teny] bosniaka. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
tonga (nitranga in-1) : Hatramin'ny nanombohan'ny Zoron'ny Tanora, nitombo avy amin'ny 50 ka tonga hatramin'ny 252 ny isan'ny mpitsidika ny tranomboky isan-kerinandro tao anatin'ny herintaona. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
navoaka (nitranga in-1) : Ny Zoron'ny Tanora – navoaka nahazoana alalana avy amin'ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fanintonana (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
mamaha (nitranga in-1) : Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
EIFL (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
fandaharana (nitranga in-1) : Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
tanora (nitranga in-3) : Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
lany (nitranga in-2) : Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany. (Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/9_Febroary_2014&oldid=13812699"
Voaova farany tamin'ny 9 Febroary 2014 amin'ny 21:19 ity pejy ity.